Gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee ciidamada oo xilka la wareegay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee ciidamada oo xilka la wareegay
A warsame 22 May 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyaha cusub ee Maxkamadda Sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Col. C/raxmaan maxamed Tuuryare ayaa maanta xilka kala wareegay sarkaalkiis isaga xilkaas uga horreeyey oo ah gudoomiyaha xilligaan ee gobolka Banaadir Xasan Muungaab.
Xaflada xilwareejinta oo ka dhacday xarunta maxkamadda ee Muqdisho ayaa waxaa ka qeybgalay xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay ka mid ahaayeen wasiirka Gaashaandhiga Maxamed Sheekh Xassan Xaamud, Arrimaha gudaha C/laahi Goodax Barre, Garsoorka Faarax Sheekh C/qaadir, xildhibaanno, taliyayaasha ciidamada qalabka sida, qaar ka mid ah gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka Banaadir, iyo martisharaf kale.
Gudoomiyaha gudiga Qareennada Soomaaliyeed C/raxmaan Abuukar Macalin oo ugu horeynti munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in maxkamada ciidamadu ay tahay mid Dastuuri ah oo ka mid ah awoodaha garsoorka dalka, isagoo tilmaamay in xukunnada maxkamada ay saldhig u tahay shareecada Islaamka, isagoo soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee maanta xilka la wareegay, wuxuuna ballan qaaday in guddiga Qareenadu ay si hufan ula shaqeyndoonaan gudomiyaha Maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida Col. C/raxman Maxamuud Tuuryare.
Taliyayaasha ciidamada qalabka sida oo munaasabada ka hadlay ayaa ballan qaaday iney si wanaagsan ula shaqeyndoonaan gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida.
Gudoomiyihii hore ee maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida Gen Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa ka waramay marxaladihii kala duwana ee ay soo martay maxkamada mudadii uu xilka hayay iyo duruufihii ay ku shaqeynayeen xiligaas iyo guulihii la gaaray.
Gudoomiyaha cusub ee maxkamada ciidamada Qalabka sida Col. C/raxmaan Maxamuud Tuuryare oo kadib markii uu xilka la wareegay hadlay aya uga mahadceliyay gudoomiyihii hore howshii wanaagsaneyd ee uu soo qabtay, isagoo balan qaaday inusan u jixin jixi doonin ciddi sharciga ka hortimaada, wuxuuna ku baaqay in la ansixiyo sharciga la dagaalanka argagixisada ee horyaala baarlamanka.
Wasiirka Gaashaandhiga Gen. Maxamed Sheekh oo gebagebadii munaasabadda ka hadlay ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub ee maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay iney wax ka qaban doonto kuwa wata labiska ciidamada ee dhigta isbaarooyinka.
Xil wareejinta maanta ayaa kusoo beegantay xilli hay’adda u doodad xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ku eedeysay maxkamadda ciidamada iney fulisay xukuno aan cadaalad aheyn iyo kuwa aysan shaqo ku laheyn.
Shabeellaha Dhexe: Alshabaab oo askari ku dilay deegaan ay maamulaan
Why is Glenn Greenwald Protecting the CIA?